निर्माण व्यवसायी महासंघको चुनाबमा काँग्रेस संग पछारियो सत्तारुढ नेकपा ! || सुनौलो नेपाल
निर्माण व्यवसायी महासंघको चुनाबमा काँग्रेस संग पछारियो सत्तारुढ नेकपा !
काठमाडौँ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा कांग्रेस निकट रवि सिंह विजयी भएका छन् । शनिबार भएको चुनावमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट उम्मेदवार यक्षध्वज कार्कीलाई पराजीत गर्दै सिंह विजयी भएका हुन् ।
सिंहले कार्कीभन्दा १ सय १३ मत बढी प्राप्त गरे । सिंहले ४ सय ६६ मत पाउँदा कार्कीले ३ सय ५३ मत पाएका थिए । अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी रामशरण देउजाले ६६ मत पाए । उनी पनि कांग्रेसनिकट हुन् ।
कार्की यसअघि २ पटक अध्यक्षमा पराजीत हुन् भने एकपटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । यस्तै, महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निकोलस पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । उनी सिंह प्यानलकै हुन् ।
पाण्डेले आफ्ना प्रतिष्पर्धी लक्ष्मण कुमार रानालाई पराजित गरेका हुन् । पाण्डेले ४ सय ६५ मत पाएर विजयी भए भने रानाले ४ सय २८ मत प्राप्त गरेका थिए । एशोसियट्स तर्फको उपाध्यक्षमा आङ दोर्जी लामा विजयी भएका छन् । त्यस्तै महासंघको महासचिवमा रोशन दाहाल, कोषाध्यक्षमा हिरण श्रेष्ठ, आन्तरिक तर्फको उपमहासचिवमा नरहरी थपलिया र नीतिगततर्फको उपमहासचिवमा टंक चौलागाई निर्वाचित भएका छन् ।
महासंघको साधारण सभाले महासंघको प्रदेश उपाध्यक्षहरु पनि निर्वाचित गरेको छ । जस अनुसार प्रदेश १ को उपाध्यक्षमा धिरेन्द्र कुमार दाहाल, प्रदेश २ को उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रदेश ३ को उपाध्यक्षमा पेम्बा लामा, गण्डकी प्रदेशको उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पहारी, प्रदेश ५ बाट टोप बहादुर रायमाझी, कर्णाली प्रदेशबाट राम बहादुर खड्का र प्रदेश ७ बाट टेक बहादुर सेठ्ठी निर्वाचित भएका छन् ।
आइत, अशोज ७, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस